एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको पहिलो जित, हेर्नुस को-को चम्किए ? | Hulaki Online
एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको पहिलो जित, हेर्नुस को-को चम्किए ?
रोमाञ्चक खेलमा नेदरल्याड्सलार्इ एक रनले हराउँदै नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटमा पहिलो जित हात पारेको छ । २१७ रनको लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोलीले ९ विकेट गुमाएर २१५ रन मात्र बनाउन सक्यो । अन्तिम ओभरमा नेदरल्याण्डसलार्इ मात्र ६ रन चाहिएको थियो । कप्तान पारसले पहिलो बलमा एक रन दिए । दोस्रो बलमा दिएनन् तर, तेस्रो बलमा एक र चौथो बलमा २ रन लिएपछि घरेलु टोलीलाई अन्तिम २ बलमा २ रन चाहियो ।
पाँचौं बलमा पारसले फेरि रन दिएनन् । अब अन्तिम बलम २ रन चाहियो । अन्तिम बलमा कप्तान पारसले डच खेलाडीलार्इ रन आउट गर्दै नेपाललाई ऐतिहासिक जित दिलाए ।
त्यसअघि २९ औं ओभरमा सन्दिप लामिछानेले नेपाललार्इ ठूलो ब्रेकथ्रू दिलाएका थिए । नेदरल्याण्डसका दुर्इ ब्याट्म्यानले ८४ रनको साझेदारी गरिसकेका थिए र विकेट लिने नेपालको एकपछि अर्को प्रयास असफल भइरहेको थियो । ओभरको तेस्रो बलमा सन्दिपले डीजे टेर ब्राकको महत्वपूर्ण विकेट दिलाए ।
नेपालल नवौं विकेट लिँदा नेदरल्याण्ड्सको स्कोर १८५ रन थियो र उसलाई अझै ३२ रन चाहिएको थियो । तर, एफजे क्लासन र पीएन भान मिकेरिनले सम्हालिएर खेलेका थिए । अन्तिम ओभरकोअन्तिम बलमा पारसले क्लासनलाई रन आउट गर्दा नेपाल विजयी बन्यो । नेपालका सन्दिप लामिछानेले ३ विकेट लिँदा ललित भण्डारीले २ र सोमपाल कामी, पारस, बसन्त रेग्मी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले १-१ विकेट हात पारे ।
३३ बलमा १९ रन बनाएका सुवास खकुरेल १२ औं ओभरमा आउट भए । धरमराएको नेपाली ब्याटिङ त्यसपछि लयमा आउने देखिएको थियो । तर, कप्तान पारस खड्कासँग साझेदारी गरिरहेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी रन आउट हुन पुगे । १७ बल खेलेका ऐरीले ३ चौकाको मद्धतमा १९ रन बनाएका थिए । एकदिवसीय क्रिकेट इतिहासकै चौथा कान्छा खेलाडी रोहित कुमार पौडेलले पनि आफ्नो प्रभाव पार्न सकेनन् । १५ बल खेलेका उनी ६ रन बनाएर आउट भए ।
आरिफ शेख ४६ बलमा १६ रन बनाउँदा आउट भए । ९ बल खेलेका बसन्त रेग्मी एक रन बनाएर आउट भए । सन्दीप लामिछानेले २२ बलमा ८ रन र ललित भण्डारीले ९ बलमा ४ रन बनाए । नेदरल्याण्ड्सका फ्रेड क्लासेनले तीन, पिटर सिलरले दुई, मिचेल रिप्पोन दुई र पोउल भ्यान मेकेरिन र शेन स्यान्टनरले एक/एक विकेट लिए । साउन-१८, २०७५